DH-FP milina fetsy flexo mankany Uganda - DH Flexo Printing
Tamin'ny fiandohan'ny volana 2019, taorian'ny fisedrana mafy andro maromaro dia nahatratra ny fepetra faneken'ny mpanjifa ny gazety DH-FP flexo ary vonona ny halefa any Uganda.
DH_FP flexo manindry an'i Oganda
Ny milina dia misy vondron'ny loko 8 amin'ny alàlan'ny baoritra, miaraka amina baraingo, lamination, kitapo ary toerana hafa, izay ampiasaina matetika amin'ny famokarana labiera.
Noho ny teknolojian'ny mpanjifa mahaleotena dia afaka mameno haingana ny famolavolana ny fisoratana ny DH-FP ary mitazona ny filaminana ho an'ny fisoratana anarana mandritra ny dingan'ny fanontam-pirinty. Ny fomba fanorenana ihany koa dia mety ho an'ny mpanjifa mba hampidirina toeram-piantsonana samihafa mifanaraka amin'ny fepetra arahina.
Amin'ny maha-modely manan-danja ny indostrian'ny fanontam-pirinty, ny DH-FP dia miorina amin'izao fotoana izao any amin'ireo firenena sy faritra, anisan'izany i Shina, Rosia, Torkia, sns. Tena mahomby sy miasa tsara izany.
Raha mila fanazavana bebe kokoa, antsoy ny contact: eric@donghang.cn
Machine Masinina fanontam-pirinty DH-Jiaolong dia naseho tao amin'ny fampiratiana Shanghai 2019 SINO Corrugated Exhibition.
Masinina fanontana flexo DH-JL 2200mm malalaka vonona halefa →